News - Alaabooyin cusub oo ka samaysan dharka Maro adag ee dhalada ah
Maro adag Maro adag Magaca dharka marada ah ee muraayadda dhalada ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'birta' fluoron heerkulka sare ee rinjiga u adkaysta (alxanka) maro, waa la joojiyay polytetrafluoroethylene (badanaa loo yaqaan caaga King) emulsion sida alaabta ceeriin, oo lagu dhajiyay maro jilicsan oo muraayad sare leh. waxqabadka sare, ujeedooyin kaladuwan oo ujeedooyin badan oo isku dhafan alaabooyin cusub Sababtoo ah waxqabadkeeda heer sare ah, waxaa si weyn loogu isticmaalaa duulista, warqadaha, cuntada, ilaalinta deegaanka, daabacaadda iyo dheehida, dharka, warshadaha kiimikada, dhalooyinka, daawada, elektarooniga, dahaadhka, dhismaha (Qaab dhismeedka xuubka saqafka maryaha salkiisa), jeexista gawaarida, mashiinada iyo waxyaabo kalebeeraha.
Astaamaha waxqabadka guud ee dharka Teflon:
1. loo isticmaalay heerkul hoose inta udhaxeysa -196 ℃ iyo heerkul sare oo udhaxeeya 350 ℃. Cimilada u adkaysta iyo gabowga u adkaysta Codsiga wax ku oolka ah ka dib, haddii si joogto ah loo dhigo 200 maalmood oo ah 250 ℃ oo leh diirimaad sare, ma aha oo keliya in xoogga la dhimayo, laakiin sidoo kale culeyska lama dhimayo.Marka la dhigo 350 ℃ ilaa 120 saacadood, miisaanka kaliya ayaa hoos u dhacay 0.6% ama wax la mid ah; Xaaladda -180 temperature heerkulka aadka u hooseeya ma jabi doono, oo wuxuu ilaalin doonaa jilicsanaanta asalka ah.
2. aan-adhesion: ma fududa in loo hoggaansamo walax kasta.Fudud in la nadiifiyo dhammaan noocyada wasakhda saliidda, wasakhda ama lifaaqyada kale ee ku lifaaqan dushiisa; Dufan, cusbi, dahaadh, ku dhowaad dhammaan walxaha koollada si fudud ayaa looga saari karaa;
3. adkaysi u leh daxalka kiimikada, wuxuu u adkeysan karaa aashitada adag, alkaliska adag, aqua aqua iyo daxalka kaladuwan ee kaladuwan ee organic.
4. Isugeyn khilaaf hooseeya (0.05-0.1) waa doorashada ugufiican is-saliidaynta saliid la’aanta ah.
5. Wareejinta iftiinka illaa 6 ~ 13%.
6.with waxqabadka ningax sare (joogto ah dielectric yar: 2.6, tangent hoos 0.0025), anti-ULTRAVIOLET, anti-guurto.
7. xasilloonaan cabbir wanaagsan (isku dheellitirnaan dheeri ah oo ka yar 5 ‰), xoog sarreysa. Qalabka farsamada wanaagsan.
8. iska caabbinta daroogada iyo sun aan sunta lahayn.Waxay u adkeysataa ku dhowaad dhammaan alaabada dawooyinka.
9. dab damiska.
1. Dahaarka ka hortagga usha, goomaha, dharka iyo suunka isweydaarsiga; Marka loo eego dhumucda noocyo kala duwan, oo loo adeegsado suumanka qalabka wax lagu qalajiyo ee kala duwan, suunka dhejiska, suunka wax lagu xidho, iwm
2. Alxanka alaabada balaastigga ah, dharka alxanka ee alxanka iyo shaabadaynta;
3. Nadiifinta korantada sare: dahaadhka korantada ee salka, spacer, goomaha iyo liner-ka.
4. Lakabka xirashada kuleylka u adkaysta; substrate la dahaadhay, duubka jirka dahaaran.
5. Mashiinka microwave-ka, xaashida foornada iyo qalajinta cuntada;
6. Suunka dhejiska, wareejinta daabacaadda miiska kulul, rooga gadaal gadaal u fidinaya suunka wax lagu qaado, suunka xambaarka caagga ah ee bullaaciga ah, waraaqda xoqan ee lagu daaweynayo marada sii deynta, iwm.
7. Cajalad xasaasi ah oo cadaadis xasaasi ah maro salka ku haya.
8. Qalabka xuubka dhismaha: dahaadh loogu talagalay goobo isboorti oo kala duwan, teendhooyinka saldhigyada, balastarrada, teendhooyinka muuqaalka, iwm.
9. Waxaa loo adeegsaday dahaadh ka hortagga sunta ee dhuumaha kala duwan ee batroolka kiimikada, baabi'inta ilaalinta deegaanka ee gaaska qashinka warshadda tamarta, iwm.
10. Magdhow jilicsan, maaddada is-khilaafsan, jeex jeex jeex jeexan.
11. Maro ka-hortagga maqaarka ah ayaa la samayn karaa ka dib marka si gaar ah loo farsameeyo.
Waqtiga boostada: Aug-03-2020
Aluminized Maro adag, Maro adag Dahaarka Acrylic, Maro adag Maro adag, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric, Maro Maro ah,